जापान पहिलो चोटी आउदाको ल्यांगेज ब्यारिअर | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापान पहिलो चोटी आउदाको ल्यांगेज ब्यारिअर
म जापान २ महिनाको लागि इन्टर्नसिप गर्न आउने कुरा तय भयो, तब मलाई घरमा भेट्ने सबैले एउटा प्रश्न गरि रहन्थे, के तिमीलाई जापानी भाषा बोल्न आउछ ?
“नाई, मलाई अलिकति पनि जापानिज आउदैन”, मेरो जबाफ सबैलाई एउटै हुन् थियो।
तर मा ल्यान्गेज ब्यारिअरको एउटा मात्र समस्याले आफुले जापान जान पाएको मौका गुमाउन चाहान्न थिए। जापान जना केहि हप्ता बाकि थियो। म भाषा पढ्ने एपहरु आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्न थाले। तर ति एपहरुले मलाई जापानमा प्रयोग गरिने सान्दर्भिक भाषा भन्दा जापानी भाषाको व्याकरण बढी सिकाउथे। मलाई थाह थियो कि भाषा एक दुइ हप्ताको पढाईले आउने ज्ञान होइन। तर पनि आफ्नो जापान यात्राको तयारि गर्न थाले।
अलिकति पनि जापानी भाषा नआउने भएकोले म जापान उत्रिने बितिक्कै लाटी जस्तै हुने कुरा मलाई ज्ञान थियो। टोक्योमा ल्याण्ड गरे पस्चात अंग्रेजी बोल्ने बाहेक अरु संग म केहि कुरा गर्न सक्दिनथे। मलाई निकै हेल्पलेस फिल भयो। सुरुमा त मैले जापान रोजेर कुनै गल्ति त गरिन जस्तो लाग्यो। तर म हार मान्ने वाला पक्कै थिन। मलाई टोक्योको बसाईले लाइफमा सबै कुरा सजिलो संग पाईदैन भन्ने कुरा सिकाउने वाला थियो र एउटा प्रिभिलेज्ड सोसाईटीमा हुर्केको म यो अनुभब गर्न चाहन्थे।
ल्यान्गेज ब्यारिअर साचिकै गारो र ईण्टिमिडेटिङ्ग हुन्छ। मा झुटो बोल्दिन तर यो कुराले आफुलाई नया ठाउ वा नया देश घुम्न जान नरोक्नु होस्। म यहाँ आएको लगभग एक महिना हुन थाल्यो। अनि रमाइलो कुरा मैले यहाँ प्रयोग गरिने केहि व्याक्यांश सिकी सके। म यी कुराहरु आफ्नी काममा देखि अन्य ठाउमा पनि प्रयोग गर्दछु।
आज म हजुरलाई यी ल्याअङ्गेज ब्यारिअर बाट कसरि माथि उठ्ने र आफ्नो जापानको बसाई सजिलो बनाउने कुरा बताउछु।
ट्रेन र सबवेहरु
यदि हजुर स्टेट्सको सिकागो र न्यु योर्कबाट हुनु हुन्न भने पक्कै पनि हजुरलाई जापानको ट्रेन सिस्टम निकै नौलो र झुक्किने खालको लाग्न सक्दछ। मलाई सुरु चोटी ट्रेन चढ्दा निकै अप्ठेरो लागेको थियो। एउतै स्टेसनमा थुप्रै लाईनका ट्रेन हरु, त्यो भन्दा बढी एक्जिटहरु, जापानको ट्रेन सिस्टम विशाल छ। तर एक चोटी बुझिसके पछि हजुरलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि यो ट्रेन सिस्टममा निकै राम्रो म्यानेजमेन्ट छ। बिस्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरलाई म्यानेज गर्न यहाँको ट्रेन सिस्टमले ठूलो भूमिका खेल्दछ। म एक हप्तामै ट्रेन बाट धेरै ठाउमा जना सक्ने भए।
मलाई गुगल म्याप एप, ट्रेन स्टेसनमा हुने अंग्रेजी नोटिस बोर्ड र अंग्रेजी एनाउन्समेन्टले निकै साहयता गर्यो। गुगल म्याप यहाँ हजुरको मिल्ने साथि बन्ने छ। अनि जापानमा यो आईफ़ोनको म्याप एप भन्दा निकै राम्रो छ। यसले हजुरलाई कुन लाईनको कुन ट्रेन कुन प्ल्याटफर्म बाट चढ्ने मात्र नभई कति वटा स्टेसन पछि उत्रिने सम्म देखाउछ। त्यसैगरी ट्रेन फेर्नु परेमा कहाँ बाट कसरी चेन्ज गर्ने पनि देखाउछ। म यहाँ आएर एक चोटी पनि गलत ट्रेन चढेको छुइन।यसको श्रेय गुगल म्यापलाइ ७५ % जान्छ।
त्यसैगरी हरेक स्टेसनमा कुन स्टेसन आयो, यो पछि कुन स्टेसन आउछ र यो स्टेसनमा कुन कुन लाईनको ट्रेन चेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा अंग्रेजीमा एनाउन्स हुने र कुनै कुनै ट्रेनको ढोका माथिको डिस्प्लेमा पनि देखाउने हुनाले निकै सहज हुन्छ। त्यतिमात्र नभएर ढोका माथि हेर्नु भयो भने त्यो ट्रेन लाईनको सानो नक्साको चित्र पनि राखेको हुन्छ। त्यो नक्सामा प्रत्यक स्टेसन क्रमबद्धरुपमा लेखिएको हुन्छ। प्रत्यक स्टेसनलाई अंक पनि दिईएको हुन्छ। यदि हजुरलाई नाम याद गर्न अप्ठेरो लागे, कति नम्बरको स्टेसन हो, त्यो याद गर्नुहोस। यति कुरा ध्यान राख्नु भयो भने हजुर जापान वा टोक्योको ट्रेन सिस्टम संग कहिले झुक्किनु हुने छैन।
मैले यहाँ आएर सिकेको एउटा फ्रेज जुन ट्रेनमा पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यो हो सुमिमासेन। यो भनेको अंग्रेजीमा एक्सक्युजमी मी वा आई एम सरि।
कुनै रेस्टुराण्टमा अंग्रेजी बोल्कने मानिस हुन्छन भने कुनैमा हुदैन। त्यसैगरी कुनैमा अंग्रेजी मेनु हुन्छ भने कुनैमा हुदैन। यो सबै ठाउ अनुसार फरक पर्दछ। पर्यटकहरु आईरहने पपुलर ठाउ हो भने त्यहाँ हजुरले सहजै अंग्रेजी बोल्ने स्टाफ पाउन सक्नु हुन्छ। त्यसैगरि मेनु पनि अंग्रेजी भाषामा राखिएको हुन्छ। त्यसैगरी अलि हाई एण्ड रेस्टुराण्टमा पनि हजुरले अंग्रेजी प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। तर टोक्योको डाउनटाउन तिर भएका ईजाखायाहरुमा त्यस्ता मेनु र स्टाफ नहुन सक्छन।
यदि मेनु जापानीमा छ भने सर्ब प्रथम त यो भन्नुस, ” एगो मेनु “। यो भनेको अंग्रेजी मेनु सोदेको हो। यदि छ भने स्टाफले हजुरलाई ल्याएर दिनेछन। मैले “एगो मेनु” भनेको ५०% ठाउमा अंग्रेजी मेनु पाएको छु। त्यसैगरि कन्भेअर बेल्ट वाला सुशी पसलमा हजुरले अंग्रेजी भाषाको टच स्क्रिन पाउने हुने छ। अंग्रेजी नभए रंगिन चित्र राखिएको हुन्छ। रामेन र अन्य नुडल पसलमा पनि मेसिनबाट टिकट लिने ठाउ छ भने त्यहाँ अंग्रेजीमा लेखिएको हुन्छ।
यदि हजुरले केहि गरि पनि अंग्रेजी सहायता पाउनु भएन भने केहि छैन गुगल ट्रान्स्लेट एप खोल्नुहोस। त्यो एपमा हजुरले मेनुको चित्र लिएर ट्रन्स्लेट गर्न सक्नु हुन्छ। यो त्यति विस्वाशिलो माध्यम त होइन तर केहि नहुनु भन्दा निकै राम्रो हो। त्यसै गरि मेनुमा चित्र हेरेर पनि हजुरले खाने कुरा अर्डर गर्न सक्नु हुनेछ। हैन भने एक्स्पेरिमेण्ट गर्नुहोस। मेनु हेरेर तेतिकै अर्डर गर्नु होस्। जे आउछ खानुहोस्। यो पनि त नया कुरा सिक्ने मौका हो। के थाह संयोगवस हजुरले बेस्ट जापानी फुडपो भेट्नु हुन्छ कि ? मा र मेरो साथीले एउटा रेस्टुराण्टमा औलाले देखेर यो दिनु भनेर अर्डर गरेको छौ। हामीलाई थाह थिएन कि हामीले के अर्डर गरेउ। तर हामी त्यति निराश पनि भएनौ।
आजलाई जापानको ट्रेन र रेस्टुराण्टको कुरामात्र। यो लेखलाई मा एउटा सेरिज जस्तै बनेर लेख्नेछु। ल्यागेज ब्यारिअर संग जुध्ने मेरो क्रम जारि नै रहने छ।